Helio G90: MediaTek ဂိမ်းကစားသူများသည်စျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်ခဲ့သည် Androidsis
Helio G90: MediaTek ၏ဂိမ်းပရိုဆက်ဆာသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
ဂိမ်းစမတ်ဖုန်းများသည်ဈေးကွက်တွင်ဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုလတွင်ပင်ဈေးကွက်ထဲ၌နှစ်ယောက်ရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် MediaTek သည်ဤဈေးကွက်ကဏ္segmentတွင်ပါ ၀ င်လိုသည်။ Helio G90 ပရိုဆက်ဆာများကိုအသုံးပြုထားသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းလွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ဂိမ်းကစားသူများအတွက်ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာများစတင်ပါ.
ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအကွာအဝေးနှစ်ခုမှာရှိတဲ့ချစ်ပ်များထားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Helio G90 နှင့် Helio G90T အကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဤကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ။ စျေးကွက်အပေါ်အာဏာအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်းများတွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြအစွမ်းထက်ပရိုဆက်ဆာနှစ် ဦး ။ အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အရေးပါသောကြိုတင်မဲ။
MediaTek သည်ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပရိုဆက်ဆာများဖြင့်စွန့်ခွာထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်၏တိုးတက်မှုကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အခု အသစ်တစ်ခုကိုစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းရိုက်ထည့်ပါQualcomm ကလုံးဝကြီးစိုးထားတယ်။ ၎င်းကိစ်စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်၎င်းတို့ကိုတင်ပြနိုင်သည်။
နယူး Helio G90
ကုမ္ပဏီမှဤပရိုဆက်ဆာအသစ်များကို Helio P90 ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်မြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းများအတွက်ပရိုဆက်ဆာများကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Snapdragon 855. သို့နည်းနည်းသက်သာသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည် Helio G90 နှင့် G90T တို့သည်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်များတွင်ရေပန်းစားသည်။ ပိုမိုကျိုးနွံသောအမှတ်တံဆိပ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာတွင်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုရှိသည်။
ကုမ္ပဏီကငါတို့နှင့်မျှဝေထားပြီးဖြစ်သည် ဤအသစ်သောပရိုဆက်ဆာများ၏ဒေတာ။ MediaTek မှမည်သည့်အရာကိုမျှော်လင့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ ဤအချက်များမှာ -
Core:2လက်မောင်း Cortex-A76 ။ Helio G2 တွင် 90 GHz အထိ; Helio G2,05T တွင်2GHz 90 နှင့်6GM အထိ 55 ARM Cortex-A2 အထိရှိသည်
လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများဖြစ်စဉ်ကို: 12 nm
GPU ကို: Mali-G76 3EEMC4 လက်မောင်း။ အဆိုပါ Helio G720 အပေါ် 90 MHz; Helio G800T ပေါ်တွင် 90 MHz
Resolution အတွက် 2520 x 1080 pixels အထိထောက်ပံ့နိုင်သည်
RAM ကို: Helio G10 အတွက် 2133 GB ကို4MHz LPDDR90x အထိ 8 GB အထိ
သိုလှောင်မှု- eMMC 5.1 နှင့် UFS 2.1 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ကင်မရာများ - တစ်ခုတည်းအာရုံခံကိရိယာအတွက် 64 MP သို့မဟုတ် dual-system မှာ 24-16 MP ။ အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုတွင် Helio G90 သည်အများဆုံး 48 Mpx အထိရောက်ရှိသည်။
ဆက်သွယ်မှု: 12 × 13 MIMO, 4CA, 4QAM၊ dual-4G ဆင်းမ်ကဒ် 3/256 4G LTE modem ...
ဤနယ်ပယ်ရှိအသစ်အဆန်းများအနက်တစ်ခုမှာ Hyperengine ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာအားဂိမ်းများအတွင်းအများဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန် Artificial Intelligence ကိုအသုံးပြုသောဗဟိုစနစ်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းသည်အချိန်တိုင်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်။ ပိုမိုအစွမ်းထက်သောရလဒ်ကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်များ၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုများ၊ ချောမွေ့သောကာတွန်းရုပ်နှင့်များစွာသောအရာများ။ ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကစားစရာအတှေ့အကွုံကောငျးဖို့ကြှနျုပျတို့လိုအပျသမြှ။
MediaTek သည် GPU ကိုအသုံးပြုသည် Mali-G76 3EEMC4 လက်မောင်း ဤအ Helio G90 သည်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်အရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်တွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိသည်ဟုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဆိုလိုရပေမည်။ ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းနှင့်ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုအလေးချိန်ခဲ့သည်တစ်ခုခုပါပဲ။ ထို့ကြောင့်၎င်းပရိုဆက်ဆာများကိုအလေးအနက်ထားရန်နှင့်ဈေးကွက်တွင်အလားအလာရှိစေရန်ပြုလုပ်ရန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ဤပရိုဆက်ဆာအသစ်များကိုအသုံးပြုသောပထမဆုံးဖုန်းများစျေးကွက်သို့မည်သည့်အချိန်၌ရောက်ရှိမည်ကိုမသိရသေးပါ။ MediaTek သည်ဈေးနှုန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းမဖော်ပြခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဘာကိုမျှော်လင့်ရမှန်းမသိဘူး၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုသိပေမယ့်စျေးကြီးတဲ့ပရိုဆက်ဆာတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ဒါကဂိမ်းစမတ်ဖုန်းကဏ္ sector ကိုလည်းဒီသဘောနဲ့ဈေးချိုတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုစွန့်ခွာသွားစေလိမ့်မယ်။ ဖြစ်နိုင်စရာ Helio G90 နှင့်အတူပထမဆုံးဖုန်းများကိုလအနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာမျှဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပေ။ ဒီပရိုဆက်ဆာတွေကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Helio G90: MediaTek ၏ဂိမ်းပရိုဆက်ဆာသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Nubia Z20 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးဖော်ပြပြီး၎င်း၏ dual-screen ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်